मालिक हराएको भन्दै मजदुरले आफैं... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मालिक हराएको भन्दै मजदुरले आफैं चलाउन थाले क्यासिनो रोयल
आधिकारिक व्यवस्थापक हराएको भन्दै क्यासिनो रोयलमा कार्यरत मजदुर आफैंले चलाउन सुरू गरेका छन्।
क्यासिनोको आधिकारिक व्यवस्थापक को हो भन्ने पुष्टि नभएकाले मजदुर युनियनका नेताको रोहबरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर युनियनका अध्यक्ष अर्जुन खनालले जानकारी दिए।
दरबारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा रहेको उक्त क्यासिनोमा अपरेटर अवैध भएपनि मजदुर अलमलमा परेका छन्।
१८ वर्षसम्म आरबी टुट्लेले चलाएको उक्त क्यासिनो आजभन्दा ठिक दश वर्षअघि अर्थात् सन् २०१० फेब्रअरी ६ मा नयाँ व्यवस्थापनले सम्हालेको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई नाता पर्ने राजबहादुर सिंहले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालीले उक्त क्यासिनले त्यतिबेला सम्हालेको थियो।
त्यतिबेला गिल्टले पुरानै मजदुर तथा दायित्वसहित व्यवस्थापन सम्हालेको थियो।
पछिल्लो समय व्यवस्थापन फेरिएको थियो।
होटलले आफ्नो नाममा भएको क्यासनोको लाइसेन्स खारेज भएकाले तत्काल बन्द गर्न दिएको निर्देशन बिरुद्ध व्यवस्थापनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले कम्पनीसँग भएको सम्झौता अवधिसम्म निर्वाध क्यासिनो चल्न दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि सरकारले २०७१ सालमै लाइसेन्स खारेज गरेपनि निर्वाध चल्यो।
आदेश ल्याएपनि उक्त क्यासिनोले न त रोयल्टी नै बुझाएको थियो न कुनै सरकारी नियमअनुसार कर नै तिरेको थियो। तर व्यवस्थापनमा भने उतारचढाव आइरह्यो। अदालतको आदेश ल्याउने सुरेन्द्रबहादुर सिंहले पनि क्यासिनो छाडे। उनीबाट भारतीय नागरिक आशिष पटेलले किनेका थिए। उनले किने पनि गेष्टल भने जयन्ती थापाको नाममा गरे। थापा क्यासिनोकै कर्मचारी पनि थिइन्।
पछि आशिष पटेल पनि बाहिरिए अन्तत: क्यासिनो थापाकै भयो। उनले अनिश शर्माको माध्यमबाट चलाउँदै आएकी थिइन्।
सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेको र कम्पनीलाई २०७१ मै जान भनेपनि अदालतको आदेशले रोकिएको गेष्टकका लागि बुधबार अन्तिम दिन थियो। सम्झौता अवधिसम्म निर्वाध चलाउन दिनू भन्ने अदालतको आदेशअनुसार पनि हिजोदेखि नै क्यासिनो छाड्न होटल व्यवस्थापनले पत्र थमायो।
माघ २० मा काटिएको उक्त पत्रमा होटलले गेष्टल इन्भेष्टमेन्टलाई होटललाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भाडा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी सबै बुझाएर ठाउँ खाली गर्न भनिएको छ। तर होटलले त्यस्तो पत्र दिएपनि व्यवस्थापन भने सम्पर्क बाहिर रहेको मजदुरहरुले आरोप लगाएका छन्।
विगत २८ वर्षदेखि काम गरिरहेका मजदुरहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी नभई नछाड्ने अडानसहित मजदुरहरु बसिरहेका छन्।
'हामीले आजसम्म काम गरे बापतको पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज, अवकासमा जाँदा पाउनुपर्ने सुविधाको कसले हेरिदिन्छ? क्यासिनो होटलसँग सम्झौता गरेर चलाउने हो सम्झौता सकिएपछि छाड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ तर हाम्रो आजसम्मको सञ्चय कोष के हुन्छ? यसको ग्यारेन्टी नभइ कसरी छाड्ने?' अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संगठनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा क्यासिनो रोयलका मजदुर संघ अध्यक्ष अर्जुन खनालले भने।
गएको केही दिनदेखि व्यवस्थापनका मान्छेहरु सम्पर्कबिहिन भएको उनले बताए।
यही कारण आफूहरुको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नहुन्जेल क्यासिनो आफै चलाउने उनीहरुले घोषणा गरेका छन्।
होटलले भने नयाँ व्यवस्थापनलाई क्यासिनो दिन ठाउँ खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।
क्यासिनो रोयलमा मजदुरको बिचल्ली, सम्झौता सकियो व्यवस्थापक 'सम्पर्क बिहिन'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २३, २०७६, २२:२९:००
सात महिनापछि खुल्ने आन्तरिक उडानमा एयरलाइन्सहरूले तोके न्यूनतम भाडा